Lasy tsara indrindra Ubon ivelan'ny trano lay ho an'ny olona 6 tantera-drano avy hatrany fametrahana lay indroa sosona fianakaviana lay miaraka amin'ny removable orana-manidina fanampiny lehibe kabine lay misy masoandro aloky ny vanim-potoana 3 mpanamboatra sy orinasa |Chuangya
Naturehike Ultralight Folding Camping Seza Comforta...
Fototra ivelany Textilene Adjustable Zero Gravity Fol...
Lay lasy an-kalamanjana Ubon ho an'ny olona 6 Lay fametrahana eo noho eo dia tsy tantera-drano. Lay fianakaviana roa sosona miaraka amin'ny orana azo esorina
⛺ Fivoriambe mora: Izy io dia iray amin'ireo lay malalaka indrindra amin'ny karazany.Ny andry aluminium mandeha ho azy dia mitondra amin'ny fametrahana mora kokoa latsaky ny iray minitra amin'ny olona roa
⛺ Fiarovana amin'ny rano Manerana: Ny polyester PU2000mm 190T tsy tantera-drano dia manolotra lay ho anao eo noho eo, ny zorony vita amin'ny welded ary ny tady voasarona, mitazona ny rano ho maina!
⛺ Atitany malalaka: 108 * 124 * 67 in (275 * 317 * 170cm) ny habeny dia manome toerana malalaka, mety hifanaraka tsara amin'ny olon-dehibe 6, mora mametraka kidoro rivotra roa lehibe na kitapo fatoriana tokana 6.
⛺ Famolavolana sosona roa: lay lay misy olona 6 misy sosona roa.Ny liner dia vita B3 mesh ary 190T breathable Polyester manome rivotra tsara kokoa raha oharina amin'ny tranolay mahazatra.
⛺ Varavarana D-Shape sy Alokaloka masoandro: Ampidiro ny varavarana D-Shape 2 ary famolavolana varavarankely lehibe 2 hanatsarana ny fikorianan'ny rivotra, ny aloky ny masoandro dia mipetaka amin'ny loko volafotsy eo amin'ny tany manome fiarovana amin'ny masoandro.
teo aloha: milina sandry hafainganam-pandeha, milina fandoroana sandry sandry hafainganam-pandeha, milina sandry 12 kilao
Manaraka: Hammock 285x155sm miaraka amin'ny barany, Camping Hammock an-tokotany, miaraka amin'ny lamba vita amin'ny lamba matevina ary kofehy metaly mafy, 550 lb, ho an'ny tokotany, zaridaina
Fototra ivelany Textilene Adjustable Zero Gravit...
Naturehike Ultralight Folding Camping Seza Com...